HomeWararka MaantaVan Gaal: Anaa Soo Saaray Xavi & Iniesta
Tababare Luis Van Gaal ayaa ku faanay inuu ahaa ninkii soo saaray ee dunida tusay mucjisada khadka dhexe ee labada ah , Xabi Iyo Iniesta .
Van Gaal oo laba goor oo kala duwan soo maray Barcelona, ayaa mar saddex sanno oo ahayd intii laga gaadhay 2000 ku qaatay Camp Nou, markii dambena 2002 ilaa 2003 la joogay , xiliyadaas oo uu kooxda heerka koowaad ku soo daray Xavi & Iniesta oo uu ka soo kaxeeyey kooxda heerka labaad.
“Xusuus dheer oo qaali ah bay igu leeyihiin labadan ciyaaryahan.” Ayuu ku yidhi FIFA.com.
“Waa taas arinka ugu horeeya uguna qiimaha badani, waayo ciyaaryahanadani waliba waa shaqsiyaad binu aadanimo sare ku jirto, wali imay iloobin, waa hubaal, sababtu tahay, mar kasta way ila soo hadlaan ilaa imika.”
“Naftooda waxay u horumariyeen si aan caadi ahayn , iyaga, Xavi & Iniesta iyo ciyaaryahanada kaleba, waxay mudo dheer soo ahaayeen salka ama seeska guulaha kooxda Barcelona ee wakhti xaadirkan.”
“Sidaas darteed , waan ku hanweynahay, waanan faraxsanahay sidoo kale, inaan ilaa hadda xidhiidh wanaagsan leenahay. Waxaan daawaday wiilashan oo kooxda Barcelona ee B-da u ciyaaraya, waxaanan u soo wareejiyey dhinaca kooxda heerka koowaad.
“Waa taas arinta xiisala leh , tusaale ahaan, Victor Valdes iyo Pepe Reina, waxay ku horumareen dhinaca gool hayenimada, sidaad ka aragteen wakhtiyadan dambe, Laakiin sidoo kale waxaan kooxda ku soo daray , Xavi , Iniesta iyo Carlos Puyol , waxaanan sidoo kale ilaabi Karin Thiago Motta, oo aad imika ku dhex aragteen isagoo qaranka Talyaaniga u ciyaaraya.
“Dhamaantood waxaan ka soo qaatay kooxda heerka labaad, waxaanan keenay heerka Koowaad , horumar degdeg ah ayay sameeyeen oo aan caadi ahayn, waxaanay gaadheen heerka sare ee ay taagan yihiin.” Ayuu hadalkiisa ku soo afjaray Tababare Van Gaal.